EPL: Kooxda Man City oo gashay kaalinta labaad ee horyaalka, kaddib markii ay guul soo laabasho ka gaartay Arsenal oo ay soo dhowaysay… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Kooxda Man City oo gashay kaalinta labaad ee horyaalka, kaddib markii ay guul soo laabasho ka gaartay Arsenal oo ay soo dhowaysay… + SAWIRRO
(Manchester) 18 Dis 2016 – Kooxda kubadda cagta Man City ayaa ku degtay kaalinta labaad ee kala horreynta horyaalka Premier League, markii ay guul soo laabasho ah ka gaartay naadiga Arsenal oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Etihad.
Arsenal ayaa goolka la horreysay waxaana u dhaliyey afartii daqiiqo ee ugu horreysay ciyaarta Theo Walcott, kaddib markii baas hagaagsan oo uu ka helay saaxiibkiisa Alexis Sanchez inta wax yar horay ula dhaqaaqay kubbad joog hoose ka socotana dhanka midig ka dhigay goolka uu ilaaliyaha ka ahaa Bravo, Gunners oo 1-0 ku hoggaamisay Man City oo gurigeeda joogta ayaana lagu kala nastay kulankan.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Man City ayaa la timid ciyaar dardar iyo baasas u dhisan waxaana u suura gashay inay ciyaarta dhanka kale u rogaan, waxaana goolka barbaraha u dhaliyey Leroy Sane.
Goolkii ugu horreeyey Leroy Sane ee uu u dhaliyo Man City ayuu ahaa waxaana uu yimid daqiiqaddii 47’aad ee qeybtii dambe ee ciyaarta, iyadoo uu ka caawiyey David Silva, waxaana uu dhammaystiray kubbad uu soo karoosay, isagoo dhinac ka dhigay goolka Arsenal kulanka ayaana sidaas ku noqday barbaro 1-1.
Kooxda Manchester City ayaa soo degtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, iyadoo leh 36-dhibcood, 17 kulan oo ay ciyaartay, halka Arsenal ay ku jirto kaalinta afaraad inkastoo 34-dhibcood ay la wadaagto kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Liverpool oo kulan u harsan yahay.
James Rodriguez oo si cad u sheegay: Ma hubo inaan la sii joogayo Real Madrid"
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii soo laabashada ahayd oo ay Man City ka gaartay Arsenal